ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကို ဖြုန်းတီးမှုအများဆုံး ကစားသမားက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အခွင့်အရေးတွေကို ဖြုန်းတီးမှု အများဆုံး ကစားသမားများ အပိုင်း(၂)
15 Nov 2018 . 4:10 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက မိုင်တိုင် (၁၂)ကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အခုလောလောဆယ် ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံးစာရင်းမှာ အဂွဲရိုး Agüero (၈ဂိုး)၊ အူဘာမီယန်း Aubameyang နဲ့ ဟာဇက် Hazard (၇ဂိုးစီ)တို့က ဦးဆောင်နေကြတယ်။ သူတို့တွေက အပြိုင်အဆိုင် ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေ သွင်းနေပေမယ့် ဒီကစားသမားတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အခွင့်အရေးတွေ လွဲချော်နေတဲ့ ကစားသမားတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၂)အပြီး ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ ဖြုန်းတီးမှုအများဆုံး ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
5 Michail Antonio – 18 shots – West Ham
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေတုန်းက ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းအတွက် ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့တဲ့ အန်တိုနီယို Michail Antonio အတွက် ဒီရာသီဟာ လာခြင်းမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ တောင်ပံ၊ တိုက်စစ်နေရာတွေမှာ လိုသလို ကစားနိုင်သူဖြစ်သလို အမြင့်ဘောကစားတာမှာ ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သူ အန်တိုနီယိုဟာ အရည်အသွေးရှိပေမယ့် ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
4 Christian Eriksen – 18 shots – Spurs
ဒီစာရင်းမှာ စပါးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဗိသုကာ အဲရစ်ဆင် Christian Eriksen ဟာ အဆင့်(၄)နေရာရှိနေတာက အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေတယ်။ Set-piece Specialist အဲရစ်ဆင်အနေနဲ့ မကြာခင် ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။
3 Nathan Redmond – 19 shots – Southampton
ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှာ အဓိက အားထားရတဲ့သူလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ရက်ဒ်မွန်း Nathan Redmond ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့အတွက် ဆောက်သမ်တန် ရလဒ်ဆိုးနေတာက သိပ်တော့ အံ့သြစရာမဟုတ်ဘူး။ ရက်ဒ်မွန်းဟာ Finishing အရမ်းကောင်းတဲ့သူ မဟုတ်ပေမယ့် ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၁၉)ကြိမ်မှာ တစ်ဂိုးမှ မရတာကတော့ တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲ ဆိုရမယ်။
2 Aaron Mooy – 19 shots – Huddersfield
ဟတ်ဒါဖီးလ်ကွင်းလယ်လူ အာရွန်မွိုင်း Aaron Mooy က တိုက်စစ်ထက် ဂိုးဖန်တီးဖို့ကို ပိုအားသာတဲ့သူဖြစ်လို့ သူ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာကို အပြစ်ဆိုလို့တော့ မရပါဘူး။ ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းရဲ့ ပင်တိုင် ပယ်နယ်တီကန်သွင်းတဲ့သူဖြစ်လို့ လာမယ့်ပွဲတွေကျရင် အာရွန်မွိုင်းအနေနဲ့ ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့ဖို့တော့ ရှိပါတယ်။
1 Steve Mounie – 21 shots – Huddersfield
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းက (၆)ဂိုးသာ သွင်းထားတဲ့အတွက် သူတို့အသင်းက ကစားသမားအများစု အခုစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဟတ်ဒါဖီးလ်တိုက်စစ်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အားကိုးရတဲ့ မူနီး Steve Mounie ဟာ ဒီရာသီမှာတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ (၇)ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်အထိ တစ်ဂိုးမှ မရသေးပါဘူး။
ဒီကစားသမားတွေကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီးအထိ ဂိုးပေါက်မတွေ့သေးတဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအနေနဲ့ လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကျရင်တော့ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ . .
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အခှငျ့အရေးတှကေို ဖွုနျးတီးမှု အမြားဆုံး ကစားသမားမြား အပိုငျး(၂)
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲက မိုငျတိုငျ (၁၂)ကို ရောကျရှိလာပါပွီ။ အခုလောလောဆယျ ပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစာရငျးမှာ အဂှဲရိုး Agüero (၈ဂိုး)၊ အူဘာမီယနျး Aubameyang နဲ့ ဟာဇကျ Hazard (၇ဂိုးစီ)တို့က ဦးဆောငျနကွေတယျ။ သူတို့တှကေ အပွိုငျအဆိုငျ ခွစှေမျးပွဂိုးတှေ သှငျးနပေမေယျ့ ဒီကစားသမားတှနေဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ အခှငျ့အရေးတှေ လှဲခြျောနတေဲ့ ကစားသမားတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၁၂)အပွီး ဂိုးသှငျးခှငျ့တှေ ဖွုနျးတီးမှုအမြားဆုံး ကစားသမားတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတှတေုနျးက ဝကျဈဟမျးအသငျးအတှကျ ဂိုးတှသှေငျးယူခဲ့တဲ့ အနျတိုနီယို Michail Antonio အတှကျ ဒီရာသီဟာ လာခွငျးမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ တောငျပံ၊ တိုကျစဈနရောတှမှော လိုသလို ကစားနိုငျသူဖွဈသလို အမွငျ့ဘောကစားတာမှာ ပိုငျနိုငျကြှမျးကငျြသူ အနျတိုနီယိုဟာ အရညျအသှေးရှိပမေယျ့ ဂိုးပေါကျပြောကျနတောကတော့ စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။
ဒီစာရငျးမှာ စပါးအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျဗိသုကာ အဲရဈဆငျ Christian Eriksen ဟာ အဆငျ့(၄)နရောရှိနတောက အံ့အားသငျ့စရာကောငျးနတေယျ။ Set-piece Specialist အဲရဈဆငျအနနေဲ့ မကွာခငျ ဂိုးပေါကျပွနျတှလေိ့မျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရတာပါပဲ။
ဆောကျသမျတနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှာ အဓိက အားထားရတဲ့သူလို့ သတျမှတျရမယျ့ ရကျဒျမှနျး Nathan Redmond ဂိုးပေါကျပြောကျနတေဲ့အတှကျ ဆောကျသမျတနျ ရလဒျဆိုးနတောက သိပျတော့ အံ့သွစရာမဟုတျဘူး။ ရကျဒျမှနျးဟာ Finishing အရမျးကောငျးတဲ့သူ မဟုတျပမေယျ့ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၁၉)ကွိမျမှာ တဈဂိုးမှ မရတာကတော့ တိုကျစဈကစားသမားတဈဦးအတှကျ မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ပဲ ဆိုရမယျ။
ဟတျဒါဖီးလျကှငျးလယျလူ အာရှနျမှိုငျး Aaron Mooy က တိုကျစဈထကျ ဂိုးဖနျတီးဖို့ကို ပိုအားသာတဲ့သူဖွဈလို့ သူ ဂိုးပေါကျပြောကျနတောကို အပွဈဆိုလို့တော့ မရပါဘူး။ ဟတျဒါဖီးလျအသငျးရဲ့ ပငျတိုငျ ပယျနယျတီကနျသှငျးတဲ့သူဖွဈလို့ လာမယျ့ပှဲတှကေရြငျ အာရှနျမှိုငျးအနနေဲ့ ဂိုးပေါကျပွနျတှဖေို့တော့ ရှိပါတယျ။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဟတျဒါဖီးလျအသငျးက (၆)ဂိုးသာ သှငျးထားတဲ့အတှကျ သူတို့အသငျးက ကစားသမားအမြားစု အခုစာရငျးမှာ ပါဝငျလာတာဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဟတျဒါဖီးလျတိုကျစဈမှာ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ အားကိုးရတဲ့ မူနီး Steve Mounie ဟာ ဒီရာသီမှာတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှားပဲ (၇)ပှဲကစားပွီးတဲ့အခြိနျအထိ တဈဂိုးမှ မရသေးပါဘူး။
ဒီကစားသမားတှကေတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီးအထိ ဂိုးပေါကျမတှသေ့ေးတဲ့ ကစားသမားတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့တှအေနနေဲ့ လာမယျ့ပှဲစဉျတှကေရြငျတော့ ဂိုးပေါကျပြောကျနတေဲ့ မှတျတမျးဆိုးကို အဆုံးသတျနိုငျဖို့ လိုအပျနပေါပွီ . .